Best Festivals In Europe Uye papi | Save A Train
musha > Travel Europe > Best Festivals In Europe Uye papi
Nguva kuti bato avo heti iri uye kuridza zvitsitsinho majombo ndokurongedza! Tiri wakarindira Best Festivals in Europe uye kuti papi. Wagadzirira kuungana nzira yako kuburikidza chirimo? 🙋🏻
Best Festivals in Europe: Creamfields, Daresbury, nyika dzakabatana
Creamfields ndiyo imwe Best Festivals in Europe uye muUK kuti chikuru kutamba mumhanzi mutambo. Kunyatsoshandisa Bank yako zororo muna August uye bhuku tikiti kumafaro mega!
Havana matanho vakatsaurira neimba, EDM, Techno, Drum uye bass, nomweya, utsinye, uye zvakawanda, zvichiita Creamfields kuti vaende-kuti mutambo kuzotamba mumhanzi Fans mu Britain.
Mutambo wegore rino 2019 unouya nemhepo yekusarudzika. Vachava voga chehondo iconic kutamba supergroup Swedish House Mafia ari UK. Vachavakwawo nemitambo Deadmau5 uye chokupika Cirez D rokutanga & Adam Hwange.
kubatana 70,000 vanhu kuti vadzoke Summer ose kunakidzwa immersive mumatanho itsva, paakaita inogadzirwa mumatunhu, light shows, uye pyrotechnics.
Best Festivals in Europe: the primavera Sound 2019. Barcelona, Speini
Tiri kuda mutambo uyu nokuti mifananidzo zvose kwezvikonzero. Kunze kwavo Ultra cryptic mashoko avo evanhu nevezvenhau platforms pamusoro okupedzisira mashoma, runyerekupe vakanga yodzoka pamusoro chii 'The New Normal’ zvinogona kureva. Buda Primavera Facebook peji kuona chii isu kureva.
Chii Tinonyatsoda zvazvo, ndiko kuti mutambo akaratidza vavariro yakajeka kusunungura pamusoro indasitiri-yakafara rubatso kuzadzisa kuenzana chechikadzi kumiririrwa pamusoro lineups. Vari achibayira posita kuti kunoyerera dzisiri hunodzorwa varume. Asi zvichida zvakakosha, ndiwo munhu chakaipa ine-siyana kunovhengana mabasa kuti vakaratidza kuva vakakodzera nechekuita mukugarisana pamusoro achangopfuura, zvisinei chechikadzi, Genre, kana kuchizvarwa.
Zvikurukuru forgoing tsika imwe kana maviri headliners rimwe zuva inonyatsoita, musangano kunge rakazara pamusoro bhiri rimwe zuva aine pfuma tarenda, kusanganisira likes ose Erykah Badu, pingudza Impala, Solange, Future, Cardi B, Interpol, Janelle Monáe, Robyn, panguva, Christine uye Queens, James Blake, uye Mac DeMarco.
Check out vhidhiyo kana zvimwe zvinogutsa!
Sziget Festival 2019. Budapest, Hangari
Sziget ndiye Best Festivals in Europe Pachiwi uye azere mumhanzi, tsika nemagariro, rudo, uye rusununguko! basa! Apo tinoita wemasaini kukwira? Mira, Ngatitore imi vamwe mashoko okutanga.
Mutambo wekutanga Sziget rakarongwa shure 1993 sezvo vashoma kuungana uye kubva rakavapo kupinda rimwe remasangano mumhanzi mitambo muEurope. Gore negore vanoedza kuunza Szitizens vamwe zvikuru mazita ikoko, Boka pamusoro 1,000 rinoratidza mhiri 60 nzendo, nokuti 7 mazuva twasu. Rehydrate munhu? 😝
Chii chatinoda nezvemutambo uyu uye chii chinovagadzika kwatiri?
The weight they put on art as well as music. There are multiple venues including a circus, mitambo, miziyamu kota, uye zvakawanda. Artists uye vatambi dzinobva munyika yose kuratidza matarenda avo. Panewo mikana Szitizens uye Artists kushanda pamwe chete kuitira kuti kusika asingakanganwiki uye hune mifananidzo.
Kana kuti akanga asiri tonhorera zvakakwana, vari zvakare eco ushamwari! Ivo vanoedza kuburitsa iro meseji chero nguva pavanogona uye kukumbira mutambo-vanoenda kuti vave se eco-kuziva.
Unonzwa akafuridzirwa kutevera mumhanzi kuburikidza Europe uye kuona Best Festivals in Europe? Zvadaro bhuku chitima tikiti achibatsirwa Save A Train !
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-festivals-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Creamfields #Europemusicfestival #MusicFestival #Primavera #chitsuwa europetravel mutambo longtrainjourneys pati trainjourney